सरकारी ठेक्कामा ओम्‍नीको वर्चस्व- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २८, २०७६ विजय तिमल्सिना
काठमाडौँ — ओम्नीले ३ वर्षअघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कागज छपाइ, निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति र मतदाता परिचयपत्र बनाउने जिम्मा पाएको थियो । सरकारी ठेक्कामा ओम्नीका लागि यी सुरुवाती यात्रा थिए तर ओम्नीले कतै पनि चित्तबुझ्दो काम गरेको थिएन ।
जनक शिक्षाको ९० प्रतिशत ‘ह्वाइट’ भएको कागज किन्नुपर्ने सर्त भए पनि ८३ प्रतिशत मात्रै ‘ह्वाइट’ भएको कागज आपूर्ति गरेको भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले परीक्षण गरेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसैलाई थाहा छैन । ‘ओम्नीले भने तीन वर्षदेखि झन्डै ५० करोडका दरले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका लागि कागज खरिद गरिरहेको छ,’ ओम्नीका ती कर्मचारीले भने, ‘गुणस्तरको कुरा छाडिदिनुस्, तीन वर्षयता जनक शिक्षाले कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक नियमित समयमा छापिरहेको छ ।’
यही बेला ओम्नीले निर्वाचन आयोगको मतपत्र छपाइ र सामान आपूर्तिको ठेक्का लिएको थियो । तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो । इलाकी जेठी छोरी साक्षी पौडेलले जागिर ओम्नीमै सुरु गरेकी थिइन् । भारतको एक बैंकमा जागिर पाएपछि उनले ओम्नी छाडेकी थिइन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद र अन्य थुप्रै परियोजनामा विवादास्पद ढंगले काम गरेको ओम्नीलाई निर्वाचन आयोगले महँगोमा मतदाता परिचयपत्र छाप्न दिनुका साथै छपाइको काम सकिएपछि ओम्नीबाटै प्रिन्टर खरिद गरेको खुलेको छ ।
‘ओम्नीले प्रिन्टर ल्याएर मतदाता परिचयपत्र छापिदियो र काम सकिएपछि आयोगले प्रिन्टर खरिद गर्ने टेन्डर निकाल्यो,’ खरिद प्रक्रियाबारे जानकार आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘ओम्नीले आयोगलाई प्रयोग भइसकेको प्रिन्टर बिक्री गर्‍यो ।’
आयोगले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको मतदानका लागि परिचयपत्र छपाउन ओम्नीलाई २०७४ साउन १२ गते प्रति परिचयपत्र ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा ठेक्का दिएको थियो । ओम्नीले मतदाता परिचयपत्र छाप्न लागत महँगो पर्ने भन्दै प्रतिथान १४ रुपैयाँमा मात्रै उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै साउन १४ मा निवेदन दियो । ओम्नीको निवेदनअनुसार आयोगले १३ रुपैयाँ ५० पैसामा छाप्न जिम्मा दियो । आयोगले फेरि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३ रुपैयाँ ५० पैसाकै दरमा २१ लाख ७० हजार ९ सय ८५ थान मतदाता परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा ओम्नीलाई नै दियो ।
आयोगले स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सकिएपछि मतदाता नामावली छाप्ने भन्दै ओम्नीबाटै बिनाप्रतिस्पर्धा फेरि साढे २४ करोडभन्दा बढी मूल्यमा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । आयोगले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने रंगीन र सादा मतदाता नामावली छाप्न १३ थान प्रिन्टर बिग्रिएको भन्दै ओम्नीबाट १ थान रंगीन प्रिन्टर, २ थान श्याम श्वेत प्रिन्टर २४ कराड ५३ लाख ९ हजारमा खरिद गरेको थियो ।
ती प्रिन्टर जडान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । ‘ओम्नीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयुक्तहरूलाई निकट राखेर सियोसमेत अरू कम्पनीबाट खरिद गर्न नसक्ने बनाएको थियो,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगको ओम्नीसँगको सम्बन्ध र बिनाप्रयोजन प्रिन्टिङ खरिद विषयमा प्रश्न उठाइसकेको छ । ‘२०७४ वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेट्ने गरी मेसिन खरिद गर्ने योजना बनाउनुपर्नेमा निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भएपछि निर्वाचनको उत्तराद्र्धमा उक्त मेसिन खरिद गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त मेसिनको पाटर््स, टोनर खरिद र जडान गर्ने कार्य विलम्ब गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गराइएको छ ।’
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि सामान खरिद पनि ओम्नीबाटै गरेको थियो । आयोगले स्वीकृत परिमाणभन्दा करिब ५० लाख थान बढी सामग्री खरिद गरी ५ करोड ९ लाख १७ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘त्यतिखेर हामीले निर्वाचन आयोगमै डेढ लाख कार्ड छाप्यौं,’ ओम्नी सम्बद्ध ती कर्मचारीले भने, ‘पछि प्रिन्टिङ मेसिन पनि आयोगलाई नै बेचेर हिँड्यौं ।’
तीन चरणमा भएको निर्वाचनको कार्ड छाप्दा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हात पारेको थियो ।
निर्वाचन आयोग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको ठेक्काबाट मनग्य आम्दानी भएपछि ओम्नीको आकार बढ्यो । त्यसका मालिक तुलहरि ठूला करदातामा दरिए । अब उनले करोड हैन, अर्बको कारोबार गर्न थाले । ‘यी दुवै ठेक्कामा ओम्नीमाथि प्रश्न उठ्नुपर्ने हो तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जिम्मा दिएर पुरस्कृत गरियो,’ ओम्नी निकट स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवत: धेरै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने योजना थियो होला । झन्डै २० दिन अघिदेखि केही चिनियाँ ओम्नीको अफिसमै आएर बसेका थिए ।’ उसो त ओम्नीलाई औषधि उपकरण ल्याउन दिने सरकारी चलखेल पनि महिना दिन अघिदेखिकै थियो ।
ओम्नीको १७ बुँदे प्रस्टीकरण
विवादास्पद विवरण सार्वजनिक भएको करिब एक सातापछि ओम्नी समूहले विज्ञप्ति जारी गरी १७ बुँदे स्पष्टीकरण दिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको संलग्नता नरहेको, सञ्चार माध्यमले आक्रमण गरेको र निहित व्यक्तिहरूले प्रोपोगान्डा बनाएको उसको आरोप छ । ‘विपदको यस घडीमा देश, जनता तथा सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसायले सहभागी भएको, कुनै बदनियत नरहेको र सञ्चार माध्यमबाट फैलाइएको भ्रष्टाचार भएको भन्ने अफवाहमा कुनै सत्यता नरहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यू, अन्य माननीय मन्त्रीज्यू तथा सल्लाहकार तथा अन्य पक्षको यस सम्झौतामा कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य उतारचढाव रहेको र केहीमा तलमाथि पर्न गएको उसको स्विकारोक्ति छ । ‘विभागमा पीपीई सेटको एकमुस्ट कोटेसन ४२.९८ डलर पेस गरेको र पछि छलफल हुँदा सेटभित्र ५ प्रकारका आइटमको मूल्य अलग अलग छुट्याउने क्रममा एन–९५ मास्कको मूल्य केही बढी उल्लेख हुन गएको र गाउनको मूल्य परल मूल्यभन्दा १६ डलर कम उल्लेख भई तलमाथि पर्न गएको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, वायुसेवा निगमको जहाज चार्टर्डमा १ करोड ५३ लाख ८५० रुपैयाँ परेको पनि जनाइएको छ । ‘तोकिएको मितिअगावै आपूर्ति गरी दोस्रो लट र पहिलो लटको बाँकी समान सम्झौताबमोजिम अप्रिल २ तारिखमा ढुवानी गर्न जहाजका लागि नेपाल वायुसेवासँग समन्वय गर्दा ४ अप्रिलअगाडि जहाज उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी प्राप्त भएको, यस विषम परिस्थितिको जानकारी लिखित रूपमा विभागमा गराउँदा समेत एकतर्फी रूपमा सम्झौताको प्रावधानविपरीत सम्झौता भंग गरेको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ओम्नीले २४ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ओम्नीले ‘यस सम्झौतामा कतै कुनै कमीकमजोरीका कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाणित भए सच्याई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तत्पर रहेको’ जनाएको छ । ‘यस विषम घडीमा निहित स्वार्थ भएका केही तत्त्वको जालोले चलाएको प्रोपोगान्डामा कुनै सत्यता नभएको दृढतासाथ स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ ओम्नीले भनेको छ ।
*यसअघि समाचारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगलाई ६ सय वटा ल्यापटप र पावरव्यांक उपलब्ध गराएको भनी समावेश भएको जानकारी त्रुटी भएकाले सच्याइएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:१३
चैत्र २८, २०७६ मञ्चला झा
‘हूलमूलमा जीउ जोगाउनू, अनिकालमा बीउ जोगाउनू’उखानको सान्दर्भिकता अहिले विश्वव्यापी भएको छ । कोरोना भाइरसबाट अहिले मानव जाति आक्रान्त छ । के शक्तिसम्पन्न के गरिब, सबै मुलुक त्राहिमाम् छन् ।
यसको जोखिमबाट बच्न मानव–मानव भौतिक दूरी नै सर्वोत्तम विकल्प भनिएपछि संसार ससानो भूगोलमा सीमित भएको छ । स्वभावैले स्वतन्त्र र खुला वातावरणमा विचरण गर्न रुचाउने मानव आज यति भयभीत र लाचार भएको छ, ऊ घर वा कोठाभित्र खुम्चिन विवश भएको छ ।
तीव्र गतिले फैलिँदै गएको यो महाव्याधिले विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर पार्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले प्रक्षेपण गरेअनुसार, सन् २००८–९ को भन्दा पनि ठूलो आर्थिक संकट विश्वले भोग्नुपर्नेछ । यस संक्रमणबाट बच्न अनेक मुलुक लकडाउनको अवस्थामा पुग्नुले पनि यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक क्षति निम्तिने निश्चित देखिन्छ ।
यो महाव्याधिका कारण अमेरिकाजस्तो बलियो अर्थतन्त्र भएको महाशक्तिलाई समेत ठूलो धक्का लागेकाले विश्वका अन्य गरिब र अविकसित मुलुकको अवस्था के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वभरिका प्रायः व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा, विकास–निर्माणका पूर्वाधार र परियोजनाहरू यतिखेर ठप्प र रोजगारदाता कम्पनीहरूसमेत धराशायी भएकाले मजदुरी गरी दुई छाक टार्नेहरू बिचल्लीमा पर्न लागेका छन् । यी जोखिम न्यूनीकरणका लागि साना–ठूला प्रायः देशले राहत प्याकेज ल्याउन थालेका छन् । यस्ता प्याकेजको प्राथमिकतामा गरिब बेरोजगार र असहाय छन् । तर कोरोनाले एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी महाव्याधिको आकार लिइसकेकाले यसबाट पर्ने आर्थिक जोखिमको मूल्यांकन गरी न्यूनीकरणको साझा पहल हुने नै छ ।
कोरोना तरंगले यतिखेर विश्वको राजनीतिक परिवेश नै फेरिएको छ । विश्व महाशक्ति अमेरिका र नवउदाउँदो शक्ति चीनबीच केही समययता चिसिएको व्यापारिक सम्बन्ध कोरोना प्रारम्भ भएसँगै उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
आफ्नो बोलीका कारण सधैं चर्चामा आउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका चीनलक्षित पछिल्ला अभिव्यक्ति र चीनले अमेरिकामाथि लगाएको आरोपले सुरु भएको वाक्युद्ध यतिखेर साम्य हुनु र कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सहयोग तथा सहकार्यका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नुले मानवताका अगाडि शक्तिउन्मादको कुनै स्थान हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
कोरोनाका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको साझा संगठन सार्कसमेत जुरमुराएको छ । दक्षिण एसियामा कोरोनाको प्रवेशसँगै सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूबीच भएको भिडियो कन्फ्रेन्स र कोरोनाविरुद्ध खडा गरिएको कोषले साझा प्रयासको सन्देश दिएको छ । आशा गरौँ, विश्वव्यापीकरणको यो युगमा कोरोनाले अहंकारको तुषलाई क्षयीकरण गर्दै ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को पाठ सिकाउनेछ ।
बिथोलिएको संस्कृति र मानवता
कोरानाले यतिखेर सबभन्दा बढी प्रभाव मानव जीवनको सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षमाथि पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समाज र मानव–मानवबीचको भौतिक दूरी बनाउन आह्वान गरेपछि अहिले विश्वभरि नै यसको अभ्यास भइरहेको छ । जुन मुलुकले सामाजिक–भौतिक दूरीलाई व्यवहारमा जति सफलतापूर्वक लागू गरेको छ, त्यहाँ त्यति नै कम कोरोनाको जोखिम खेप्नुपरेको छ । तर सामाजिक दूरीको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष अहिले के देखिएको छ भने, यसले मानव–मानव सम्बन्ध नै बिथोलिन पुगेको छ ।
सुख–दुःख बाँड्न मानिसलाई समाज चाहिन्छ । मानवीय संस्कार, रहनसहन र सिकाइमा समाजको ठूलो योगदान हुन्छ । जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी यत्तिकै भनिएको हैन । यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण २०७२ मा गएको भूकम्पमा देख्यौँ । उचनीच, जातभातको सबै विभेद मेटिएको थियो त्यति बेला । ठूलठूला महल र झुपडीमा बस्नेहरू एउटै टेन्टभित्र बसेका थिए, खानेकुरा बाँडेर खाएका थिए । तिनले सुख–दुःख सेयर गरेको देख्दा लागेको थियो— गजबको छ यो प्रकृतिको लीला, जसले धनी र गरिबबीचको सीमा मेटाइदिएको छ । तर अहिले कोरोना भाइरस विचित्र रूप लिएर आएको छ । अन्य महामारीभन्दा तीव्र गतिले फैलिने यसबाट बच्न समाजबाट पृथक् रहनुपर्ने, भीडभाड र जमघटबाट टाढिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यतिसम्म कि, नातेदार, कुटुम्ब र छिमेकबाट समेत अलग भएर बस्न मानव जाति यतिखेर विवश छ । स्थिति यस्तो भयावह र त्रासद बन्दै गएको छ, कोही मर्दापर्दा आर्यघाट जानसम्म मान्छे हच्किने अवस्था छ । कोरोना संक्रमितप्रति मानवता र सहानुभूति जगाउनभन्दा घृणा र गालीगलौज बर्साउन यही समाजको एक तप्का उद्यत छ । अस्पतालहरूमा साधारण रोगका बिरामी आए पनि डाक्टरहरू हच्केर बिदामा बस्ने र बिरामीहरूलाई फिर्ता पठाउनेसम्मको अमानवीय व्यवहार पनि देखिएको छ । मानिसहरू न्यूनतम मानवीय दायित्वबाट पनि पन्छिन थालेका छन् । गाउँघरमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार गर्ने, सम्बद्ध परिवारबाट मुख लुकाउनेसम्मको अवस्था देखिन थालेको छ । कोरोना कहर लामो समयसम्म कायमै रह्यो भने हाम्रो सामाजिक जनजीवनमा दूरगामी असर पार्ने सम्भावना छ । कतै यसै कारण भविष्यमा सामाजिक सौहार्दमा ह्रास आउने त हैन ? मानवीय सम्बन्धमा चिरा उत्पन्न गर्ने त हैन ? गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
कोरोनाको कहर साम्य भएपछि पनि हाम्रो समाज पहिलाजस्तो खुला नरहला । हिजोसम्म आफन्त या प्रियजन, इष्टमित्रलाई भेट्दा जसरी मानिस आलिंगनबद्ध हुन्थे, अब त्यसो गर्न निश्चय पनि झस्किन्छन् होला । भर्खरभर्खर समतामूलक सामाजिक अभ्यासतर्फ अग्रसर हुँदै गएको नेपाली समाजमा पनि यसले प्रभाव पार्ने नै छ । यसको मारमा सबभन्दा बढी फेरि दलित, सीमान्तकृत र सर्वहारा पिछडा वर्ग नै पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अन्त्यमा, कोरोना महाव्याधि उग्ररूप लिएर आएको छ । मानवताविरुद्धको यो क्रूर लडाइँ जित्ने आखिर मानव जातिले नै हो । यो वास्तविकतालाई बुझेरै होला, ढिलो भए पनि आज विश्वशक्तिहरू एकजुट भएका छन् । संकटको यो बेला नागरिकको सुरक्षा र त्यसप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नु प्रत्येक राज्यको दायित्व हो । राज्यका लागि पनि यो परीक्षाको घडी हो । तर मानवीय संकटको यो समय हामी नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनु हुँदैन ।
निश्चय पनि हाम्रो मन अतालिएको छ, हामीबीच सामाजिक दूरी बढेको छ । तैपनि मानवीय संवेदना र भावनात्मक सम्बन्धले हामी जोडिएका छौँ । एकअर्कालाई भौतिक रूपमा केही सहयोग गर्न नसके पनि यो महामारीसित जुधिरहेकाहरूका लागि प्रार्थना गर्न नचुकौँ । विपत्तिको यो बेला धैर्यधारण गरौँ । न्यूनतम साझा मानवीय दायित्वबाट नपन्छौँ । मानवताका लागि एकजुट होऔँ ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:१०